Nnukwu Ugbo wii wii kụrụ na Uganda Tourist Park
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Nnukwu Ugbo wii wii kụrụ na Uganda Tourist Park
News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ugbo wii wii
Otu ndi uwe ojii abuo jikọtara ugbo wii acre 200 nke izu gara aga na ogige nke abuo kacha ibu na Uganda. Queen Elizabeth National Park, n’ebe ọdịda anyanwụ Uganda. Ndị isi ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii si Katwe na Bwera bụ ndị ọrụ nchekwa nke steeti ọgụgụ isi (ISO) nyere iwu ka a rụọ ọrụ na arụmụka kachasị ukwuu nke ihe ọkụkụ na-akwadoghị na mba ahụ ruo taa.
E jidere mmadụ abụọ n'ime ndị a na-enyo enyo n'ime ugbo dị n'ogige ahụ: Duncan Kambaho, 25, na Isaac Kule, 24, ebe ndị ọzọ si n'obodo Rwembyo na kansụl obodo Kiburara nke okpuru ọchịchị Kisinga.
Onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii (DPC) nke Katwe, Tyson Rutambika, kwuru na mkpesa sitere na mpaghara ndị agbata obi na-egosi na ọtụtụ wii wii si n'akụkụ mpaghara Kasese gbara agbataobi na-ejedebe na mpaghara ha.
O kwuru na enweela nzukọ dị iche iche iji gbaa obodo ume ka ha hapụ omume ahụ, mana ụfọdụ ka siri ike. Masereka, onye bi na mpaghara ahụ kwuru na ha tetaara ndị uwe ojii na-agbakọta mpaghara ha n'ụtụtụ Fraịde. O kwuru na ha maara na ụfọdụ ndị na-enyo enyo na-abanye wii wii na ihe ọkụkụ ndị ọzọ n'ubi ha.
Agbanyeghị na amachibidoro wii wii na Uganda rue mgbe iwu kwadoro, ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche etinyela akwụkwọ na Ngalaba Ahụike maka ikikere iji bubata ya. Firmlọ ọrụ Israel, Pharma Ltd., enwetala ala maka ịkọ na mbupụ mmanụ cannabis mgbe ị nwetasịrị nkwekọrịta n'aka ụlọ ọrụ Canada.
Dabere na Mịnịsta ahụ, Dr. Jane Ruth Aceng, ndị gọọmentị agabeghị n'ihu na ọkwa nke mkparịta ụka maka inye ikike ọ bụghị naanị iji ọgwụ ma jiri ihe eji eme ihe.
Na ederede eTN yiri ya, E kwuru na Seychelles na-achọ ịbanye wii wii na njem na-ekwu na "wii wii na-eme njem bụ ahịa a na-achọpụtaghị maka Seychelles na ọtụtụ ndị njem nleta na-enuga n'ebe ndị a na-ewere dị ka 'ahịhịa enyi.'
Site na oria ojoo nke COVID-19, otutu obodo agbakoro aka mee ihe ndi choro maka nlanarị tinyere oke ohia, ihe kachasi nma bu igbu nke Rafiki, ozodimgba ugwu nke alpha nwoke na Bwindi Impenetrable National Park. Oru wii wii na-eto eto na ogige mba, ya mere, abughi ihe ijuanya.